Malunga nathi - iZhejiang Yongjie Aluminium Co, Ltd.
Yasekwa ngonyaka we-1994, i-Yongjie yahlengahlengiswa kwigama langaphambili le-Southeast Aluminium Co, Ltd, yaba yinkampani edityanisiweyo ngo-2011. Njengenkampani yesitshixo se-High-tech, iYongjie izinikele kuphuhliso kunye nemveliso yokusebenza okuphezulu, ephezulu Iphepha le-aluminium -precision aluminium, i-coil kunye neemveliso zefoyile, uzabalazela ukuba ngumthengisi wezinto ezikumgangatho ophezulu kwizithuthi, amandla amatsha nakwamanye amashishini, kwaye iyakwazi ukubonelela abathengi ngesisombululo esibanzi kwizinto zealuminium.
Inkampani ibekwe kwindawo yeDajiangdong Industrial Cluster e Hangzhou, kwaye ingumnini wenkxaso mali: Zhejiang Yongjie Aluminium Co., Ltd, Zhejiang Nanjie Industry Co., Ltd, Hangzhou Zhongcheng Aluminium Co., Ltd, Hong Kong Nanjie Resources Co., Ltd Ngotyalo-mali olupheleleyo lweebhiliyoni ezi-2 ze-RMB, indawo yomhlaba engama-260,000㎡, kunye nomthamo wonyaka weetoni ezingama-300,000, u-Yongjie wabizwa njenge- "China Top 10 Aluminium Sheet & Coil Enterprise", enikezelwa yi-China Nonferrous Metals Fabrication Industry Association ngo-2013.
Ukudala ixesha elitsha lealuminium
Ukwandisa indawo entsha izinto ezintsha
Ukuba yingcali kwimveliso ekrelekrele yeplate yealuminium, iphepha kunye nefoyile kumandla amatsha, ukonga umbane kunye nokukhuselwa kwendalo.
Ukuziqhelanisa nokufuna inyaniso, ukubambeka kunye nokuhlala ugxileZama ukuqhubeka nokuzama, kwaye uzingise ekuphuculeniInnovation Luphi utshintsho oluncinci lutshintshoItrust Trust yenza izinto zibe lula.
Yongjie luhlanganisa imveliso, isifundo, uphando kunye nokusetyenziswa ngokusondeleyo, ungumnini kwishishini uphando kwishishini kunye workstation postdoctoral kwaye isebenzisana Beijing University of Science and Technology, Central South University, Zhejiang University, Ningbo Institute of Technology Technology & Engineering, Chinese Academy of Sciences kunye nezinye zasekhaya iiyunivesithi ezidumileyo, amaziko ophando, ukukhula kukaYongjie kuqhutywa luphuculo. Ukujonga abathengi njengeziko, u-Yongjie unyanzelisa umendo wophuhliso olukumgangatho ophezulu kwaye uzabalazela ukuba yiShishini leGolide kwishishini lokulungisa ialuminium.
IYongjie inemigca yemveliso yokuqhubekeka ngokuqhubekekayo yokuqengqeleka okushushu okuqhubekayo (DC) kunye nokuphosa okungapheliyo (CC), izixhobo eziphambili zonke zingeniswe eJamani, e-USA, eSweden nase-Itali. Iimveliso eziphambili zeYongjie kukusebenza okuphezulu kunye nokuchaneka kwepleyiti yealuminium, umtya kunye neefoyile, ezisetyenziswa ikakhulu kwicandelo le-aerospace, ezothutho, amandla amatsha, izixhobo zombane kunye nezombane, ulwakhiwo olutsha kunye nokupakisha, njl. "I-YJL" ihlonitshwe njengoPhawu loRhwebo oluDumileyo lwase China. Iimveliso zeYongjie zithunyelwe kumazwe angaphezu kwama-50 kunye nommandla, kuquka i-USA neYurophu.